Vaovao - Inona avy ireo endrika fanitsiana ny rivotra mangatsiaka kokoa
Paompy RO Purifier rano
Paompy mangatsiaka kokoa
Inona avy ireo endrika fanitsiana ny rivotra mangatsiaka
Raha ny tarehin-javatra fiasa, ny cooler rivotra dia azo zaraina amin'ny fifehezana ny tanana sy ny fanaraha-maso mandeha ho azy.
1) Ny fomba fanitsiana an-tanana dia ny manitsy ny masontsivana fiasan'ny mpankafy na ny shutter amin'ny alàlan'ny fiasan'ny tanana, toy ny fanokafana sy fanidiana ny mpankafy na fanovana ny zoro fantsom-bolo, haingam-pandeha ary ny zoro fanokafana mba hanovana ny haben'ny rivotra fantsona. Ampiasaina betsaka ny mpankafy zoro azo ovaina (fantatra ihany koa amin'ny hoe mpankafy zoro manual) ary ny shutter manual. Ny fanitsiana amin'ny tanana dia manana tombony amin'ny fitaovana tsotra sy ny vidin'ny famokarana ambany. Saingy ny kalitaon'ny fitsipika dia ratsy, tsy azo ovaina amin'ny fotoana, izay tsy mahomby amin'ny fitoniana ny kalitaon'ny vokatra (salantsalany). Mandritra izany fotoana izany dia tsy mahomby amin'ny fitsitsiana angovo avy amin'ny rivotra. Tena mahantra ny toe-draharaha, ny tariby dia taratry ny fantsona fantsona, avo dia avo ny mari-pana, tery ny toerana fandidiana ary lava loatra ny fotoana fanidiana.
(2) Ny fomba fanitsiana ny volan'ny mpankafy dia ny manova ny volan'ny mpankafy azy ho azy. Ny tena be mpampiasa dia ny mpankafy manamboatra zoro mandeha ho azy sy ny hidy fanamoriana. Ny masontsivana fiasan'ny mpankafy na ny shutter dia azo ahitsy tsirairay na miaraka. Tsy maninona izay fomba fanitsiana, azo ampifandraisina amin'ny rafitra fanaraha-maso mandeha ho azy. Ny fomba fanitsiana mandeha ho azy dia afaka mampihena ny vesatry ny asa fanelanelanana, mitazona ny fahamarinan-toerana amin'ny asa, manatsara ny kalitaon'ny vokatra, manatsara ny toetran'ny mpiasa ary mampihena ny fanjifana angovo.
Ny rivotra mangatsiaka dia karazana fitaovana izay mampiasa rivotra manodidina azy ho mpanelanelana amin'ny rivotra mba hampihenana na hanondrahana ny tsiranoka avo lenta ao anaty fantsona. Izy io dia manana tombony amin'ny tsy misy loharano, mety amin'ny mari-pana avo lenta sy ny fepetra fanerena avo lenta, androm-piainana maharitra ary vidin'ny fandidiana ambany. Miaraka amin'ny tsy fahampian'ny loharanon-karena sy angovo ary ny fanatsarana ny fiarovana ny tontolo iainana, ny rivotra mangatsiaka miaraka amin'ny fitsitsiana rano, ny fitsitsiana angovo ary ny fahalotoana dia efa be mpampiasa, karazana sy fampiharana ny karazana rivotra mangatsiaka.